News & Events Archives - Capital Taiyo Life Insurance
Capital Taiyo Life Insurance တွင် Life Planner Agent အဖြစ် လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း…
မိမိအားလပ်ချိန်တွင် အပိုဝင်ငွေရရှိအောင် တနိုင်တပိုင်လုပ်ကိုင်ဖို့စဉ်းစားနေသူ (သို့) အသက်အာမခံလုပ်ငန်းကို စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် Capital Taiyo Life Insurance တွင် Life Planner Agent အဖြစ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ Life Planner Agent […]
လစဉ်ပရီမီယံကြေးများကို Citizens Pay App မှတဆင့် ပေးသွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း …
Capital Taiyo Life Insurance တွင် အသက်အာမခံထားရှိသော Customer များအနေဖြင့် လစဉ်ပရီမီယံကြေးများကို Citizens Pay App မှတဆင့် ပေးသွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ “သင့်အနာဂတ်၊ သင့်မိသားစုဘဝ လုံခြုံစိတ်ချလှပစေဖို့ Capital Taiyo […]
အာမခံပရီမီယံကြေးကို g&g ဆိုင်များမှာ CTLI App နဲ့ အလွယ်တကူ ပေးချေနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း
Capital Taiyo Life Insurance တွင် Short Term Endowment (နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်း အသက်အာမခံ)ထားရှိသော Customer များအနေနှင့် အာမခံပရီမီယံကြေးကို g&g ဆိုင်များမှာ CTLI App နဲ့ အချိန်မရွေး အလွယ်တကူ […]
Kyimyindaing Branch operations will temporaliy be intergrated with Head Office
၀၂၁ ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့မှစပြီး ကြည့်မြင်တိုင်ရုံးခွဲ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား “အမှတ် ၇၊ ပြည်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့” တွင်တည်ရှိသော ရုံးချုပ်နှင့် ယာယီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ ကြည့်မြင်တိုင်ရုံးခွဲအား ရုံးချုပ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်သည့်အတွက် ကြည့်မြင်တိုင်ရုံးတွင် ထားရှိထားသည့် အာမခံစာချုပ်များ၏ […]
“G&G Convenience Store များမှလစဉ်ပရီမီယံကြေးများပေးချေနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးခြင်း” မင်္ဂလာပါရှင် 💕 Capital Taiyo Life Insurance Limited တွင် နှစ်တိုငွေပင် ငွေရင်း အသက်အာမခံထားရှိသော Customer များအတွက် G&G Convenience […]
“Capital Taiyo Life Insurance Limited ၏ အာမခံကိုယ်စားလှယ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ခြင်း 🎉” စီမံကိန်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အာမခံကိုယ်စားလှယ်သင်တန်းကျောင်း (Agent Training Center) ကို […]
“ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ခြင်း” Capital Diamond Star Group သည် Capital Taiyo Life Insurance Company ပါဝင်သော အာမခံလုပ်ငန်း ၊တခြားလက်အောက်ခံ လုပ်ငန်းများနှင့် Capital Diamond Star Foundation တို့မှတစ်ဆင့် […]
“Capital Taiyo Life Insurance ၏ မော်လမြိုင်ရုံးခွဲတွင်အာမခံထားရှိသူများအား အကျိုးခံစားခွင့်ငွေပေးအပ်ခြင်း”
“Capital Taiyo Life Insurance ၏ မော်လမြိုင်ရုံးခွဲတွင်အာမခံထားရှိသူများအား အကျိုးခံစားခွင့်ငွေပေးအပ်ခြင်း” Capital Taiyo Life Insurance ၏ မော်လမြိုင်ရုံးခွဲတွင် နှစ်တို ငွေပင်ငွေရင်း အသက်အာမခံနှင့် စုပေါင်းအသက် အာမခံထားရှိသူများထဲမှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူများ၊ […]
“Capital Taiyo Life Insurance ၏ Covid-19 ကာလ CSR Program မှ ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်မှုများ”
“Capital Taiyo Life Insurance ၏ Covid-19 ကာလ CSR Program မှ ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်မှုများ” Capital Taiyo Life Insurance ၏ ရုံးခွဲများတွင် နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံထားရှိခဲ့သူများမှ (199) ဦး […]
“Capital Taiyo Life Insurance Application New Version Release !”
မင်္ဂလာပါရှင်….. Capital Taiyo Life Insurance ၏ နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံထားရှိသည့် Customer များ မိမိ၏ အသက်အာမခံထားရှိမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် information များကို Capital Taiyo Life Insurance Application ထဲတွင် […]
Capital Taiyo Life is one of the new dynamic and progressive life insurance organizations in the emerging market of Myanmar. Capital Taiyo Life ... Read More
No-7 , Pyay Road , Hlaing Township , Yangon.
(+95)9-7654-53422 , (+95)9-7654-53423
© 2022 Capital Taiyo Life Insurance. Powered by Myanmar Web Design